Umatshini wokuthunga ngokuzenzekelayo, umnxibelelanisi weMaski Sok | Kuike
Ukunikezelwa kwilaphu elingezozalo oluzenzekelayo lwelaphu.
Umatshini wokuthunga oZenzekelayo
Umatshini wokuthunga we-Autohade yePhambili yePhambili
Umatshini wokuncamathisela ngokuzenzekelayo
I-Aists ye-Elastic Wiistbal Qk-375
Isikhululo se-seasti-inesitifiketi se-qk-346
I-Wistband Covestitch Umatshini Qk-346-2
Umatshini we-Elastic eshukumayo ye-qk-346-3
I-Covertitch ye-Covertitch yasezantsi yabantwana
I-hemmer esezantsi esezantsi, imikhono kunye nebottoms
I-Bib Knit Band Couting QK-343
Ikhola ejikelezayo ngokujikeleza umatshini QK-343-3
Umatshini wokwenza umatshini wokuzenzekelayo ye-QK-350
Umatshini wokwenza umatshini wokuzenzekelayo ye-QK-363
Isixhobo sePlacket sePlacket esenzekelayo se-QK-362
Umatshini weplanga yokusebenza emininzi
I-CFEC ye-cuff ye-cuff-qk-366
Umatshini wokuncamathisela ngokuzenzekelayo ye-QK-360
Ukugqithiswa kunye ne-Coverting Maching VAK-380
I-dolly esecaleni ye-seger ephindwe kabini
Oomatshini bokuthunga ngokuzenzekelayo kwilaphu le-Knit
Emva kweminyaka emininzi ukuqhubeka nokusebenzisa inkqubo yemveliso kunye nezixhobo zemveliso yengubo yokutsalwa, siphuhlise umatshini wokuthunga&Umatshini wokuthunga wezomzi-mveliso ohlangabezana kakhulu neemfuno zabathengi.
I-QK300H Covestitch ezantsi I-Hemmer
I-1.automatic ubungakanani bobungakanani bokuchonga, eqinisekisa kunye nokulawula. I-2.automatic qalisa, yigatya intambo, ulungelelwaniso, ulungelelwaniso lwentiyo. 3. I-TIFA YOKUGQIBELA YOKUFAKA ISICWANGCISO SOKUFUNDA NOKUFUMANEKA KWEXESHA LOKUQALA&Ukuphela kokuxhamla kwaye kuthintele ukufunyanwa kwesinga kwebhola yombala. I-Storam yokulawula Seampy inokuphuma kwelinye icala kwelinye icala lokwenyani. 5.Cormarcececescescescescescesces qinisekisa ukuba umkhombandlela wayo wam ohambelana kakuhle nangaphakathi. 6.Yalula uhlengahlengiso lobungakanani be-HEM.
I-QK-342 i-flat esebenzayo ye-hemmer, imikhono kunye ne-bottoms
Sisixhobo esizenzekelayo sokudibanisa ukunqongophala okuzenzekelayo, ukungena ngokuzenzekelayo, ukutywina okuzenzekelayo, ukutya okuzenzekelayo okufudukele, i-alamu yokuhambisa intambo kunye nokuqokelelwa kwenkunkuma ngokuzenzekelayo. Singayilawula ngenkqubo, inokusebenza ngokulula, kwaye ineenjongo zokusebenza kakuhle kunye nokugcinwa kwamandla. Isicelo: ihempe yehempe yehempe, impahla yempahla ye-cuff.I-1, isikhokelo esikhokelayo kunye nenkqubo yogonyo Qinisekisa ukuphakama kwe-hem iyonke.2, Imisonto ibotshwe ngokuzenzekelayo xa igqityiwe igqitywe kwicandelo ngalinye.3. Inxalenye egqityiweyo ifakwe ngokuzenzekelayo.4. Yima ngokuzenzekelayo xa ikhefu lifunyenwe.5. Intambo ye-elastic ye-elastic ayizange iphule xa i-idal6. Inkunkuma elandelayo ngokuzenzekelayo.
Ngokuzenzekelayo ibambela Umatshini Model QK-350
I-lapel yomatshini ozenzekelayo womatshini we-QK-350
Imodeli yoMgaqo-nkqubo ojikelezayo we-QK-343-3
Imodeli yoMgaqo-nkqubo ojikelezayo we-QK-343-3Amanqaku: Ezi zixhobo zokuthunga ezizenzekelayo zisetyenziselwa i-rib ye-rib ye-rib ye-rib ye-right egutyungelwe kwi-t-shitts. Ixhotywe ngesixhobo sokuxolisa ngokuzenzekelayo, umda ozenzekelayo kunye nenkqubo yokukhokela.Isicelo: Ifanelekile kwi-t-shirts yekhola.
I-QK-345 yoMatshini weTemplate yeMisebenzi yeTemplate (iMoldy + ye-USD)
I-Qk-345 yomatshini wokusetyenziswa kwe-templates.Abathengi abathenge le mveliso bonke banomdla kwi-gloze enemibala eqaqambileyo. Babesithi i-gloze yenza ukuba ibonakale ngathi yitafile ephezulu.
Imodeli ye-cuff ye-cuff ye-qk-366
I-Qk-366 yomatshini ozenzekelayo we-Cuff.Iimpawu: Ukuthumela ilaphu, ukuthunga, ukuthunga, ukufumana ukunqongophala ngokuzenzekelayo, i-alamu ye-vacuum, i-alamu yethutyana, i-swibles kunye ne-cuff ye-cuff yobude obuhlukeneyo nobubanzi. Esi sixhobo sinokuwugqiba wonke umqulu-hluha, i-Cuff iguquke kwaye inqumle ngexesha elinye, ubungakanani be-pube bunokuhlengahlengisa ubude be-cuff, ifuthe lezondlelo kunye nokufumana isixhobo sinokufezekisa i ukusebenza kakuhle.Isicelo: Zonke iintlobo ze-rib amalaphu.
Eyona nto ifanelekileyo yokuncamathisela i-qk-360 ixabiso lefektri-
Eyona nto ifanelekileyo yokuncamathisela ngokuzenzekelayo i-Qk-360 ixabiso lefektri-. ibonelela ngeemveliso ezinobuchule kunye nezibanzi.Iimpawu: Isikhululo somsebenzi esizenzekelayo sokuthunga ukuvula umlenze okuthunga kunye ne-cuff rib. Lo matshini uxhotywe ngesixhobo sokutsala i-rollerl isixhobo sokugcina ilaphu elizinzileyo ngexesha lokusebenza. Inkqubo yokulawulwa kwe-elektroniki ilungelelanisa ngokuzenzekelayo ubungakanani. Ulawulo lwe-Pneumatic kunye nolwabiwo lombane oluzenzekelayo, le nkqubo ixhotywe ngesixhobo esifanelekileyo sokufumana izinto. Isixhobo sokwandiswa ngokuzenzekelayo, umgca wokucheba ngokuzenzekelayo, njl.Isicelo: Zonke iintlobo zelaphu ezityhutywe, ekwindla kunye nezemidlalo yasebusika.
I-Quistband ye-Elastic eqhotyoshelweyo QK-375
I-qastin ye-eastic bast qho eqhotyoshelweyo QK-375.Iimbonakalo:(1) Izixhobo zokwandisa ezizenzekelayo zolawulo lobungakanani.(2) Izixhobo zokukhokela izixhobo ezikhuselekileyo zolungelelwaniso olugqibeleleyo.(3) Imisonto ilungisiwe ngokuzenzekelayo xa ukwisikisha kugqityiwe.(4) Inkunkuma yenkunkuma ezenzekelayo eqokelela.Isicelo: IJersey, i-Gycra ye-Lycra ye-Llastic Elastic.
I-Dongguan ekhawulezayo yokuzenzekelayo ye-CO., LTD, esekwe ngo-2014.
Ngaba ugxininiso lweshishini leSizwe eliPhezulu kwi-Tech kwingubo yengubo yemveliso kunye nemveliso yemveliso eyenziwayo (umatshini wokuthunga wendwangu). Ukuphanda nokwenza izinto zethu ezisisiseko zophuhliso, ukuphosa ngokukhawuleza kune-10% ye-turnover minyaka le ukuya kuphuhlisa kwaye kwandise imigca yeemveliso ezahlukeneyo, kwaye ngoku sine-r&d kunye neqela lemveliso.
Emva kweminyaka ukuqhubeka nokuxhaphaza inkqubo yemveliso kunye nezixhobo zoomatshini wengubo yokuthunga (i-ksit yokuthunga), siye saqulunqa izantlukwano zoomatshini ezizodwa zokuthunga.
Ukuba unemibuzo emininzi, bhalela thina